रणवीरले स्वीकारे दीपिकासँगको सम्बन्ध ! – हिमाल न्युज
रणवीरले स्वीकारे दीपिकासँगको सम्बन्ध !
यी दुवैले एकसाथ काम गरेको फिल्म जति हिट छन, वास्तविक जीवनमा यो जोडी पनि पनि त्यतिकै हिट रहेको छ । पछिल्लो समयमा यी दुवैले एकअर्कासँग विवाह गर्ने खबरले बलिउड तातेको छ । दुवैले स्वीजरल्याण्डमा विवाह गर्ने चर्चा चलेको छ ।
यस अघिसम्म दुवैले एकअर्काको सम्बन्धको बारेमा कुनै पनि कुरा सार्वजनिक रुपमा स्वीकार नगरेको अवस्थामा आफूहरुको विवाहबारे चर्चा चलेपछि अभिनेता रणवीर सिंहले मुख खोलेका छन ।
‘अहिले विवाहबारे कुनै पनि कुरा आधिकारिक रुपमा निर्णय भएको छैन’, विवाह गरिरहेको खबरलाई खण्डन गर्दै रणवीर सिंहले भने, ‘त्यसैले म हाम्रो विवाह कुन तारेखमा भइरहेको छ भन्ने बारे भन्न सक्दिन । अहिले हामी दुवैजना निकै व्यस्त छौं । दीपिकालाई बैंक सम्बन्धी समस्या पनि परेको छ । यदि विवाह हुने कुराको निर्णय भयो भने म दुनियालाई सबैभन्दा अगाडि भन्नेछु । ’
यहि कुराले प्रष्ट हुन्छ रणवीर सिंह र दीपिका पादुकोण एकअर्काको प्रेम सम्बन्धमा रहेका छन । रणविर र दीपिकाको विवाहको कुरा अफवाह भए पनि रणवीरले दीपिका सँगको सम्बन्धलाई सार्वजनिक रुपमा स्वीकार गरेका छन ।
बोल्ड पूजा !
यस्तो डरलाग्दो बन्यो ‘सुनकेसरी’ ट्रेलर हेर्नुहोस !
शिशिर श्रेष्ठको अभिनय तथा निर्देशनमा ‘यो मायाँ कस्तो…’...
रेजिना उप्रेती छोरी पाएपछि झनै स्लिम ! भन्छिन्,...
स्टाइलिश’ सोनमको, ‘स्टाइलिश मंगलसूत्र’
पूर्वप्रेमी फेरि आफ्नो जीवनमा आउने अाशले रणवीर सिंहसंग...
लिलिबिलीको कार्यक्रममा नायिका प्रियंका कार्की हट अवतारमा। (भिडियोसहित)
ऐश्वर्याको जन्मदिनमा यसरी शुभकामना दिए अभिषेकले
मेलिना र जोसेफको स्वरमा ‘कर्के नजर’बोलको गीत सार्वजनिक
‘फेशन ट्रेड सिजन टू’मा कलाकार देखि पत्रकारसम्म र्याम्पमा